#Ahlu Sunna oo looga ogolaaday baarlamaanka Galmudug in ay ka helaan...
#Ahlu Sunna oo looga ogolaaday baarlamaanka Galmudug in ay ka helaan…
Wararka dheeraad ah ayaa ka soo baxaya heshiisyo ay wada galeen dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Ahlu-Suna, taasoo ku aadaneyd tirada Ahlusunna ay ka heleyso Baarlamaanka cusub ee Galmudug oo howshiisa ay bilaabneyso marka uu soo dhamaado shirka lagu heshiisiinayo beelaha dega Galmudug.
Saraakiil ka kala tirsan xafiisyada labada dhinac ayaa u dusiyay Warbaahinta maxaaliga ah ee muqdisho ka hawlgasha in labada dhinac ay isla meel dhigeen tirada Ahlu-Suna laga siinayo Baarlamaanka cusub ee Galmudug iyo hanaanka ay ku imanayaan.
Inkastoo dood adag ay hareysay arnitan, ugu dambeyn waxaa la isla qaatay tiro cayiman oo Xukuumada iyo Hoggaanka AHlu-Sunaba ay isla qaateen, Kooxdan waxey hore u soo jeedisay in ay Baarlamaanka ka hesho kala bar, maadaama 89 xubnood uu ka kooban yahay, balse Xukuumada ayaa iska diiday, waxeyna u soo jeedisay in ay qaataan 15 xubnood, iyadoo Ahlu-Suna dhankeedana uu dalabkaasi u cuntami waayay.
Saxafadda, ayaa ogaatay in ugu dambeyn la isku raacay in Ahlusunna la siiyo 30 xubnood oo kamid ah Baarlamaanka cusub Galmudug, iyadoo dib loo furayo tirada guud ee uu ka kooban yahay Baarlamaanka sida Dastuurka Galmudug ku qoran oo ah 89 mudane.
Ahlu-suna ayaa la siinayaa 30 xubnood, balse waxaa ka horeysa talaabo ah in Baarlamaanka la gaarsiinayo 119 Xildhibaan, Xukuumada ayaa Hoggaanka Ahl-Suna fartay in iyaguna xubnaha ay soo xulanayaan ay ku jaan gooyaan hanaanka awood qeybsiga beelaha, si aysan buuq hor leh u iman.
Wararka ayaa sidoo kale intaas ku daraya in Ahlusunna ay wado isku day ah in ay Saamayn ku yeelato Xildhibaanada ay soo xulayaan Odayaashada dhaqanka deegaanada ay horay u maamuli jirtay si ay u soo xulaan Xildhibaano iyaga taageersan.
Ilo wareedyo ku sugan Dhuusamareeb ayaa saxafadda la wadaagay in kulan Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo waxgaradka Dhuusamareeb ku dhex maray oo laga hadlay Xildhibaanada Ahlusunna loo qorsheeyay wasiirku ka sheegay in Xukumada Samaynayso wixii Xal u noqo kara Dhismaha Maamulka Galmudug oo buuq badan hareeyay.
Ahlusunna ayaa markii ay bilowgii 2018 ku biirtay Maamulkii Galmudug ee uu Madaxweynaha ka ahaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa ay ku darsadeen Xildhibaano u dhigma tiraan ahaan kuwii hore ee Maamulka Galmudug, taasna waxa ay keentay In Xaaf iyo Saaxiibadiis Cali Gacal Casir Gudoomiyihii Baarlamaanka Galmudug iyo Maxamed Xaashi Carabay Madaxweyne ku xigeenkii Galmudug isku dhacaan iyaga oo ku doodaya in Xildhibaanada Ahlusunna keensatay aan lagu salay Awood qaybsiga beelaha Galmudug.